Izay rehetra momba ny IFA: fandefasana sy zava-baovao natolotra tao amin'ny foara | Androidsis
El IFA Izy io no iray amin'ireo lehibe indrindra foara ara-teknolojia eran-tany. Izy io dia atao isan-taona any Berlin amin'ny volana septambra ary any no mivory ireo marika lehibe ao amin'ity sehatra ity hahitana ny fanavaozana ara-teknolojia an'izao tontolo izao.
Raha tianao ny haitao dia fanendrena tsy azonao adino izany. Ho hitanao ao ireo finday, takelaka, fahita lavitra, solo-saina vaovao sy gadget maro hafa tonga eny an-tsena.
El IFA 2019 dia hatao ny 6 septambra ka hatramin'ny 11 septambra ary Ekipa Androidsis dia hanatrika manokana handrakotra ny hetsika ho anao. Hoentinay ho anao ny sary rehetra, ny horonan-tsary tsara indrindra, ny tafatafa niarahana tamin'ireo manam-pahaizana amin'ity sehatra ity sy maro hafa.
Samsung dia tsy hanatrika ny IFA 2020
ny Ignacio Sala hace Taona 1 .
Ny MWC 2020 dia tsy ny hetsika lehibe ihany no nofoanana noho ny virus coronavirus, na dia ...
Qualcomm dia hampiasa maodely 5G ao amin'ireo processeur midadasika
5G dia mahazo vahana eo amin'ny tsena, eo amin'ny sehatry ny processeur ihany koa. Eo amin'ny sehatry ny mpivady ...
Kirin 990: ofisialy ny processeur mahery an'i Huawei
Kirin 990 dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny IFA 2019. Roa herinandro lasa izay Huawei dia nanamafy fa ...
Efa manomboka izao ny IFA 2019, ary hitantsika fa marika maro no ho eo amin'ity hetsika ity. TCL dia ...
Ny Nokia 5.2, 6.2 ary 7.2 dia haseho amin'ny IFA 2019
Andro vitsy lasa izay dia voamarina fa Nokia dia ho iray amin'ireo marika izay ho ao amin'ny IFA ...
IFA 2019: Ny zavatra tokony ho fantatsika hatreto
Mandritra ny taona dia misy hetsika lehibe roa izay anehoana vokatra marobe, indrindra ny smartphone….
Finday vaovao roa hafa avy amin'ny marika frantsay: Wiko View 2 Plus sy Wiko Harry 2
Ny marika frantsay no mivarotra azy ary mitondra finday Android vaovao roa ho antsika: ny Wiko View 2 Plus ...
ny Eder Ferreño hace 3 taona .
Afaka andro vitsivitsy dia manomboka ao Berlin ny IFA 2018. Iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra ...
Huawei hanolotra EMUI 9.0 miorina amin'ny Android Pie ao amin'ny IFA 2018
Android Pie dia natao ofisialy roa herinandro lasa izay. Ankehitriny dia anjaran'ny marika ny manomboka ...
Ny Huawei P20 Pro dia hampiditra loko vaovao roa ao amin'ny IFA 2018
Ny Huawei P20 Pro no mety ho telefaona lehibe indrindra amin'ny katalaogin'ny mpanamboatra sinoa. Modely iray manana ...
ZTE dia afaka mampiseho ny Axon 9 ao amin'ny IFA 2019
2018 no mety ho taona sarotra indrindra ho an'ny ZTE amin'ny tantarany. Saingy miverina tsikelikely amin'ny ...